tsaramaso ravinkazo - Moi Mili
ravina ravina milomano
Ao amin'ny magazay an-tsika, afaka mividy kitapo vita amin'ny tanana sy quilted ravina. Izy io dia miasa tsara amin'ny toerana filalaovana efa antitra, izy io koa dia mety ho fehikibo tsara na fantsika amin'ny farafara. Ireo akora manintona ireo dia tena manampy amin'ny tranolain'i Moy Mili.
Ny tsihy malefaka sy mahazo aina dia afaka miparitaka na aiza na aiza - any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, amin'ny terasa na ao amin'ny zaridaina. Ny lamba vita amin'ny ravina vita amin'ny ravina dia mety hifanaraka tsara amin'ny ondana sy ny felam-boninkazo amin'ny mitovy amin'ny fanangonana ala. Ireo lahatsoratra ireo dia narahina tamim-pahalalana manokana ny antsipirihany.
Ravina ravina ho an'ny ankizy "goji"
Ravina ravina "mavokely mavokely" ho an'ny ankizy
Ravina ravina ho an'ny ankizy "papay"
Damba ravina ho an'ny ankizy "Fotsy sy fotsy"
"Morskie Oko" ravina ravina ho an'ny ankizy
Ravina "Mustard" ho an'ny ankizy
Damba ravina ho an'ny ankizy "lamba rongony"
Taratra ravina "Grey" ho an'ny ankizy
Ravina ravina ho an'ny ankizy "Vovo-joko mavokely"